U profile ingilazi ye-U-Glass-Jumbo ingilazi lokuphepha - i-Yongyu
Singabahlinzeki abagunyaziwe be-SGCC & CE, imikhiqizo yethu ihlangabezana nezindinganiso eziphambili zokwakha imikhiqizo yengilazi.
Injongo Yethu: Sebenzani ndawonye ukuze nizuze ukuwina-win, kwakha umbono osobala!
I-Yongyu Glass, ukukhetha kwakho okuhle ekwakheni imikhiqizo engilazi evela eChina.
Le nkampani yasungulwa nguGavin Pan, obesebenza embonini yezingilazi kusukela ngo-2006 futhi ebenesipiliyoni seminyaka engaphezu kweyishumi sokuthumela kwelinye izwe. U-Yongyu Glass uyilungu le-Vendor le-US Ice Rink Association. Umbono wethu ukwabelana ngezinzuzo eziqhathanisayo zomkhakha wezingilazi zokwakha waseChina namakhasimende, ukuhlinzeka amakhasimende ngezisombululo ezingabizi, kanye nokufinyelela ukubambisana kwe-win-win namakhasimende.
Senze imboni yezokwakha izingilazi futhi sasebenzela amakhasimende ethu ase China nakwamanye amazwe. Sithola izixazululo eziqondene nomuntu uqobo zezimfuno zamakhasimende, asize amakhasimende ukonga izindleko zesikhathi nemali.
I-Glass / U Glas Channel ye-Performance ephezulu yokusebenza ...
Iphrofayili Ye-Glass / I-Glass ye-Iron U ye-Iron U ...
Sizibophezela ekuletheni imikhiqizo ephezulu kakhulu kubathengi bethu abavela eChina, eNyakatho Melika naseYurophu ukuze bakwazi ukuthola ibanga eliphakeme kakhulu lalokho esikwenzayo.
Siphikelela ezimfanelweni zemikhiqizo futhi silawula ngokuqinile izinqubo zokukhiqiza, ezibophezele ekwenzeni zonke izinhlobo.
Njengomholi oshukumisayo embonini yokukhiqiza ingilazi, sibeka uphawu lokulinganisa lwezinqubo zokukhiqiza kuyo yomibili imikhakha yezentengiselwano nengeyona eyentengiso. Leyo yindlela yethu yokukunikeza inani elikhulu kakhulu kuwo wonke umkhiqizo owodwa, noma ngabe ufuna ukuba uhlelwe ngokwezifiso noma cha.
Trit & Ceramic Frit ne-Frosted-Low-E ...
I-Dupont Authorized SGP Ingilazi Engilaziwe
Uma udinga isixazululo sezimboni ... Siyatholakala kuwe
Sinikezela ngezixazululo ezintsha zokuthuthuka okuqhubekayo. Ithimba lethu lochwepheshe lisebenza ukukhulisa umkhiqizo kanye nokusebenza kwezindleko emakethe